Free ကစားလို့ရမယ့် MMORPG ဂိမ်း Kritika:REBOOT အကြောင်း – Gaming Noodle
Free ကစားလို့ရမယ့် MMORPG ဂိမ်း Kritika:REBOOT အကြောင်း
ပျော်စရာတွေ ယူဆောင်လာပေးဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ! GODLIKE Kritika: REBOOT ဂိမ်းဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ ကနေ စတင်ပြီး Beta Test တွေ၊ Data Reset ချတာတွေ မပါဘဲ အပြည့်အဝ ရှေ့ဆက်သွားတော့မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် စစ်မီးတွေ တောက်လောင်နေတဲ့ Kyrenos တိုင်းပြည်ကနေ သဘာဝလွန် စွန့်စားခန်း ခရီးနှင်ဖို့ သင့်ရဲ့ အပေါင်းအဖော်တွေကို ခေါ်ထားလိုက်ပါတော့။ ကြမ်းတမ်းခက်ခဲတဲ့ Dungeon တွေကို ကျော်ဖြတ်ရင်း အလွန်အမင်း ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်း တစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ခံစားနိုင်ဦးမှာပါ။
ဒါ့အပြင် ဆာဗာ စဖွင့်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ ကစားသူတွေအတွက် ဆုလဒ်တွေ၊ လက်ဆောင်တွေ အများအပြားပါဝင်တဲ့ Event တွေကိုလည်း ဆော့ကစားရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ရန်: https://f.ls/KTDownload
Guide ဖတ်ရှုရန် : https://f.ls/KTregisEN
Pre-Register အတွက် စာရင်းပေးချိန်ကို တိုးမြှင့်ပေးထားပါတယ်!! ကြိုတင်စာရင်းပေးထားသူတွေဟာ ချစ်စရာ Pet လေး “PUEY” ကို ထာဝရ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး “Smart Uniform High Tier Costume Set” လည်း ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မတိုင်ခင်ထိ “ရက်သုံးဆယ် Premium ခံစားခွင့်” တွေကို ထိုင်းဘတ်ငွေ ၂၀၀၀ ကျော် တန်ဖိုးရှိ အခြား Rare Item တွေနဲ့တကွ ရရှိနိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခုထိ Pre-Register မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့်မှာ တစ်ခါတည်း စာရင်းပေးထားလိုက်ပါတော့
အကြိုစာရင်းပေးခြင်း အချိန်တိုးမြှင့်ထားခြင်း – https://event.god.in.th/kritika/preregister/
ဆာဗာစတင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် TOP UP +20% ထိ ပရိုမိုးရှင်း
ဆာဗာ ဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် အောင်ပွဲခံတဲ့အနေဖြင့် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့အတွင်း GODLIKE ID Billing အကောင့်မှာ ပိုက်ဆံထည့်သွင်းမှုတိုင်းအတွက် 20% တန်ကြေးရှိ အပိုဆုရရှိစေမှာပါ။
ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီမှ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၁း၅၉ နာရီထိ
TOP UP rate
50THB for 192c
90THB for 346c
150THB for 576c
300THB for 1,152c
500THB for 1,920c
1,000THB for 3,840c
2,000THB for 7,680c
3,500THB for 13,440c
5,000THB for 19,200c
“c” ဆိုတာ In-game Currency ဖြစ်ပါတယ်။ Top Up လက်ခံရရှိမယ့်နှုန်းကတော့ တကယ်ပေးရတဲ့ ပမာဏကို +20% ပရိုမိုးရှင်းပေါင်းပေးမှာပါ။ ဒီနှုန်းထားကို ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်းမှသာ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Share ပြုလုပ်ပြီး အခမဲ့ Item တွေ ရယူပါ !!
Kritika: REBOOT ရဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုတွေအနက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်လိုက်ပြီး ဆာဗာထံမှ အခမဲ့ လက်ဆောင်တွေ ရယူလိုက်ပါဦး ၊ ကံထူးရှင်ရွေးချယ်တာ စောင့်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ မည်သူမဆို ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာ “GODLIKE Kritika: REBOOT Launch Post” ကို Share ပြုလုပ်ကာ သူငယ်ချင်းတွေကို အတူဆော့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့ စာတစ်ကြောင်းနဲ့ #KritikaREBOOT ဆိုတဲ့ Hashtag ကို ထည့်သွင်းထားရုံပါပဲ။ Share ပြုလုပ်သူ ပမာဏတစ်ခုကို ရောက်တိုင်း သင်ဟာ Item တွေကို အခမဲ့ ရရှိနေမှာပါ။
Share ရမယ့် Post လေးကတော့ “Godlike Kritika:REBOOT SEA” Facebook Page မှာတင်ထားတဲ့ Pinned Post လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
GODLIKE အဖွဲ့သားတွေက ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ ကူးကူးချင်းမှာ Share ပမာဏကို ရေတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆုတွေကိုတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်ယံမှာ In-game Gift Box အဖြစ် ပေးပို့သွားမှာပါ။
100 shares Getapet MongMong [MID]
200 shares getaDeer Mask [Bind] head costume.
300 shares getacostume of the head of Snowman Mask [Bind]
400 shares to receive Steampunk Weapon costume [Bind]
500 shares to receiveacomplete set of Palereligion Costume (Bind).
ID တစ်ခုဟာ ကာရိုက်တာတစ်ခုစာ တစ်ချိန်သာ ဆုကို လက်ခံရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Item တွေဟာ character binding item တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဆုတွေကို Share အရေအတွက် အမြင့်ဆုံးပြည့်မှ တစ်ပေါင်းတည်း ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – 500 Shares ရရှိခဲ့တယ် ဆိုရင် 100 ကနေ 500 shares အတွင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ Item အကုန်လုံး ရရှိမှာပါ။
ရွေးချယ်ဆော့ကစားစရာ Class အမျိုးအစား ၂၅ မျိုးထိ ရှိပါတယ်။
ကာရိုက်တာကို ရွေးချယ်ပြီးရင် ကွဲပြားတဲ့ Unique Skill တွေနဲ့ စိတ်ကြိုက် Class တစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ စစချင်း Class ဟာ General Class နဲ့ Side Class ထိ ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း Class 25 မျိုးထိ ရှိပါတယ်။
Warrior – ကြီးမားတဲ့ဓါးကို ကိုင်စွဲထားတဲ့ သန်မာတဲ့ စစ်သည်တော်၊ ကြောက်မက်ဖွယ်တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့ Tank တစ်ယောက် ○ Berserker – ကြီးမားတဲ့ဓါးကို ကိုင်စွဲပြီး အမျက်ဒေါသကို တိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရည်အင်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သူ
Fireblast – မီးဓါတ်ရဲ့ စွမ်းအင်တွေ ပြည့်နေတဲ့ သံမဏိလက်အိပ်ဖြင့် တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့ ဖိုက်တာ
Doom Blade – ဝိဉာဉ်ဓါးလက်နက်ကို အသုံးပြုတတ်ပြီး လျှင်မြန်သန်မာတဲ့ ဓါးရေးပိုင်ရှင်
Rogue – ဂိမ်းထဲမှာ အမြန်ဆုံးတိုက်ခိုက်နိုင်သူ၊ အနီးကပ်နဲ့ အလယ်အလတ် အကွာအဝေးမှ တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ လူသတ်သမား မိန်းမပျို
Wolf Guardian – အစောင့်အကြပ် ဝံပုလွေနှင့် အခြား သားရဲဝိဉာဉ်များဖြင့် တိုက်ခိုက်တတ်သူ
Assassin – ရန်သူအများအပြားကို အဆိပ်ခတ် တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ ချောင်းမြောင်းလုပ်ကြံရေးသမား
Catspaw – ချစ်စရာကောင်းသလောက် ဂိမ်းထဲမှာ တိုက်ခိုက်မှု အမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ကြောင်လေး
Gun Mage – အဓိကလက်နက်အဖြစ် သေနတ်ကို စွဲကိုင်တတ်တဲ့ မှော်ဆရာ၊ အဝေးမှ တိုက်ခိုက်နိုင်သလို အသင်းကိုလည်း အထောက်အကူ ပေးနိုင်သူ
Shadow Mage – အညှိုးအတေးများဖြင့် လွှမ်းခြုံနေပြီး သူ့ရဲ့ ကျေးကျွန် Alteo ဖြင့် ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တတ်သူ
Warp Mage – မှော်ပညာနှင့် ခေတ်သစ်နည်းပညာတွေကို ပေါင်းစည်းတိုက်ခိုက်တတ်သူ
Frost Mage – အေးခဲမှုစွမ်းအားကို အလိုရှိသလို ခိုင်းစေပြီး အဝေးမှ အထောက်အကူပြု တိုက်ခိုက်တတ်သူ
Noblia – ကြောက်မက်ဖွယ် စွမ်းအင်တွေကို ပိုင်ဆိုင်သလို Minion တွေ ဆင့်ခေါ်တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့ မှော်ဆရာမလေး
Tiny but cool Creator – ပေါက်ကွဲလက်နက်မျိုးစုံနဲ့ တီထွင်သူလေး
Elemental Fairy – အားထားဖွယ် စွမ်းရည်တွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Elemental Spirit လေးကောင်နဲ့ တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့ မှော်ဆရာမလေး
Halomage – ရန်သူတွေကို မှော်အမြောက်လက်နက်နဲ့ ရင်ဆိုင်တတ်တဲ့ မိန်းမပျိုလေး
Reaper Alchemist – လေပွေလို ဝှေ့ရမ်းပြီး တိုက်ခိုက်ရတဲ့ တံစဉ်လက်နက်နဲ့ အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်သူ
Vamp – စွမ်းအားမြင့် သွေးမှော်ပညာကို အသုံးပြုပြီး ရန်သူရဲ့ သွေးတွေကို သောက်သုံးကာ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်နိုင်သူ
Rakshasa – အနက်ရောင်သေမင်း ၊ ရန်သူတွေရဲ့ ဝိဉာဉ်တွေကို ချည်နှောင်ထားပြီး များများသတ်နိုင်လေ ဝေးဝေးကို တိုက်ခိုက်နိုင်လေ
Monk – သန်မာတဲ့ လက်သီးထိုးချက်နဲ့ လျှင်မြန်တဲ့ ခြေသိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Melee တိုက်ခိုက်သူ
Galactic Disciple – စကြာဝဠာနဲ့ ကြယ်တာရာတွေရဲ့ စွမ်းအားကို အသုံးပြုပြီး ရန်သူတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ အာရုံပြုသူ တိုက်ခိုက်ရေးသမား
Dark Worship Lord of Darkness – သန်မာတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရည်နှင့် အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်း
Steam walker – သန့်စင်တဲ့ စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုတိုက်ခိုက်သလို နည်းပညာအကူအညီဖြင့် ထိရောက်မှုကို တိုးမြှင့်ထားတာကြောင့် ရန်သူကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခွင့် မပေးမယ့်သူ
Éclair – မှော်ပညာနဲ့ Physical တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ရောနှောပြီး အလိုရှိသလို လက်နက်တွေ ဖန်ဆင်းတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့ စိတ်စွမ်းအားရှင် မှော်ဆရာ
Hong Ryoung – အသန်မာဆုံး ရတနာသိုက်ရှာဖွေသူ ၊ လက်မြန်ပြီး တိုက်ခိုက်ဖော်အဖြစ် သိမ်းဌက်တစ်ကောင်နဲ့ ပူးပေါင်း တိုက်ခိုက်တတ်သူ
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံး တိုက်ခိုက်မှုစတိုင်နဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ဆော့ကစားလိုက်ပါ
အဆက်မပြတ် ထွက်လာမယ့် သတ္တဝါဆန်းများကို Hack n’ Slash စတိုင် Gameplay နဲ့ တိုက်ခိုက်လိုက်ပါ။ စဉ်ဆက်မပြတ် လှပစွာ တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အပြင် စွမ်းရည်တွေရဲ့ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Effect တွေကြောင့် Combo တွေထုတ်ပြီး တိုက်ခိုက်ရတာကို ပျော်ရွှင်နှစ်ခြိုက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြမ်းတမ်းတဲ့ Dungeon တွေကို ဖြတ်ကျော်လိုက်ပါ!
ကစားသူတွေ ကျော်ဖြတ်အနိုင်ုယူဖို့ Dungeon တွေ အများအပြားရှိနေပါပြီ။ ပတ်ပတ်လည်ကနေ ဆက်တိုက် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာမယ့် ရန်သူတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး သင့်ရဲ့ စစ်သည်တော်စိတ်ဓါတ်ကို နှိုးဆော်ပေးမှာပါ။
Dungeon ထဲကို မဝင်ခင်မှာ ကစားသမားတွေဟာ ဆုလာဒ်တွေ ပိုရဖို့ တစ်ယောက်တည်းသွားမလား၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ အတူတူ တိုက်ခိုက်မလား ဆိုတာကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကစားသူချင်း တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေ အပြည့်အနှက်ပဲ
ကစားသူတွေ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နိုင်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ PVP စနစ်ဖြင့် အခြားကစားသူတွေကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါပြီ။ တိုက်ခိုက်မှုစနစ်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရန် Skill Combo တို့ကို ရွေးချယ်ပြီး ဘယ်သူက ဆရာကြီးလဲ ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်!
Kritika: REBOOT ဂိမ်းရဲ့ PVP စနစ်မှာ ကစားသမားတွေအတွက် ရွေးချယ်စရာ အများအပြားရှိနေပြီး “1vs1” တစ်ယောက်ချင်း ကနေ “Dead or Alive” နှစ်ယောက်ချင်း၊ သုံးယောက်ချင်း တိုက်ပွဲတွေအထိ စုံလင်လှပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်အောင်လည်း Team Mode တွေကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး “Capture the Flag” ဆိုတဲ့ ပျော်စရာ ကစားနည်းမှာဆိုရင် အဖွဲ့သားတွေဟာ ကိုယ့်စခန်းကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ သူများကို တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုပြီး တာဝန်ခွဲဝေယူကာ ဆော့ကစားရပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် PvP နှစ်သက်သူတွေဟာ ဒီဂိမ်းမှာ ပျော်စရာတွေ ရှာတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတာ သိလောက်ပါပြီနော်။
ဒါတွေဟာ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ Feature တွေထဲက အချို့မျှသာ ရှိပါသေးတယ်။ ကစားသမားတွေဟာ Kritika: REBOOT ဂိမ်းကို ယနေ့ပဲ လာရောက်ပူးပေါင်းလိုက်ပြီး Kyrenia တိုင်းပြည်အတွက် အတူတကွ တိုက်ပွဲဝင်လိုက်ပါတော့ !!
🎮 Follow information of GODLIKE Kritika:Reboot 🎮
➡️ EN Community : https://f.ls/5c4ZY
➡️ Fanpage SEA : https://f.ls/DQ7oii
➡️ Website : https://www.kritika.asiaa
#KRITIKAREBOOT #GODLIKEGames #MMORPG